Adaamaatti Atileetota Haga 4000tti Dorgommii ‘Guutuu Itoophiyaa Sadeessootti’ Waldorgomuutti jira
Dorgommiin Guutuu Itoophiyaa jedhan tun bara 1999 keessa jalqabde.Atileetoa jajjabduu biyya fulaa buutee;oloompikii, tapha Afrikaa fi dorgommii biyya alaa gugurdoof dorgomsiifatan keessaa filuuf naannolee wal dorgomsiisan.
Dorgommii Adaamaa ta Gurrandhalaa 11,2012 Istaadiyoomii Adaamaatti jalqaban tana akka jecha obbo Taammiraati Baqqalaa, daarektera Oloompikii Itoophiyaatti atileetoa 4000 tahanitti dorgommii gosa 17tiin itti jira.
Itoophiyaan barana ispoortii sadiin olompikii Londonitti dorgomti;Boksii,bisaan daakuu fi fiigicha.
Oromiyaa fi Amaartii hardha Kubbaa miilaa hardha kubbaa miilaa taphatanii 1-1 gargar bahan.Naannoleen Itoophiyaa sagallanuu dorgommii torbaan lama turutu tanatti jiran.
Taphii Guutu Itoophiyaa ka ganna lama lamatti taphatan kun amma marroo sadeessoo irra jira.Aadaa naannolee,jabeenna naannolee guddisaa namuu waan qabu wal irraa barata.Namuu badhaasaa fi maqaa argachuuf taphata.
Mee MP3 tana irraa waan qophii tanaa caqasaa.
Mee Qophii Ispoortii Hardhaa Caqasaa